लेनिन कसरी हेलिए क्रान्तिको मार्गमा ? – www.janabato.com
लेनिन कसरी हेलिए क्रान्तिको मार्गमा ?
१० बैशाख २०७७, बुधबार ०२:५२ April 22, 2020 Janabato Online
बैशाख १०, बुटवल । लेनिन आफ्नो दाजु अलेक्जेन्डरको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित थिए । लेनिनका दाजु अलेक्जेन्डर पिटस्वर्ग विश्वविद्यालयको बिद्यार्थी छँदा जारशाहीबिरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन्थे । आफ्ना जेठा दाजुबाट नै लेनिनले माक्र्सवादी साहित्यको प्रारम्भिक ज्ञान हासिल गरेका थिए ।
युवा अवस्थाका लेनिनको चिन्तनशैलीमा परिवार, वरिपरिको वातावरण, प्रगतिशील रुसी साहित्यले निकै ठूलो प्रभाव पारेको थियो । रुसमा पुँजीवादी शोषणका साथसाथै सामन्ती उत्पीडन कायम थियो, जसले सहरिया मजदुर र गाउँले किसानहरुको जीवन दयनीय तुल्याएको थियो । जारशाही अत्याचार, जमिनदार र पुँजीपतिहरुको दमन, मजदुर र किसानहरुको पददलित अवस्थाले किशोर लेनिनको हृदयमा शोषकहरुप्रति घृणा र शोषितहरुप्रति सहानुभूति पैदा गरेको थियो । जिम्नेसियम बसाइको क्रममै लेनिनको हृदयमा क्रान्तिकारी भावनाहरु पैदा भैसकेका थिए । लेनिनको परिवारिक बनोट नै क्रान्तिकारी किसिमको थियो । लेनिन आफ्नो दाजु अलेक्जेन्डरको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित थिए । लेनिनका दाजु अलेक्जेन्डर पिटस्वर्ग विश्वविद्यालयको बिद्यार्थी छँदा जारशाहीबिरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन्थे । आफ्ना जेठा दाजुबाट नै लेनिनले माक्र्सवादी साहित्यको प्रारम्भिक ज्ञान हासिल गरेका थिए ।
माक्र्सवादको गहन अध्ययन
डिसेम्बर १८८७ मा अठार वर्षीय लेनिन जारशाहीबिरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा होमिएका कारण विश्वविद्यालयबाट निष्कासित हुनुका साथै गिरफ्तार पनि भए । उनी काजान गुबेर्नियाको कोकुसकिनो गाउँमा निर्वासनमा पठाइए । बिस्तारै–बिस्तारै लेनिनको गतिविधिमाथि प्रशासनले कडा निगरानी राख्न सुरु गर्यो । निर्वासनकालमा उनी विहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म पढ्थे । उनको निर्वासनकाल एक वषर्को थियो । काजान बसाइको क्रममा उनी रुसी क्रान्तिकारी नि.ए. फेदोसेएफले गठन गरेको समूहको सदस्य बने । त्यो बेला सामाजिक क्रान्तिका लागि जर्मन दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी नेता कार्ल माक्र्सले जर्मनीकै अर्का दार्शनिक फ्रेडरिक एङ्गेल्ससँगको सहकार्यमा प्रतिपादन गरेको दर्शन तथा सिद्धान्तहरुबारे चर्चा सुरु भएको समय थियो ।
सामरा बसाइको क्रममा उनले माक्र्स र एङ्गेल्सका कृतिहरुको कठोर अध्ययन जारी राखे । उनले ल्याटिन ग्रिक, जर्मन, फ्रेन्च र अंग्रेजी भाषाको गम्भीर अध्ययन गरे । यसै समयमा उनले माक्र्स र एंङ्गेल्सले संयुक्त रुपमा लेखेका महत्वपूर्ण कृति ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’लाई जर्मन भाषाबाट रुसी भाषामा अनुवाद गरे ।
माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा प्रतिपादित दर्शन तथा सिद्धान्तलाई माक्र्सवाद भनिन्छ । नि.ए. फेदोसेएफ रुसका प्रथम माक्र्सवादी थिए । उनीबाटै प्रभावित भई लेनिनले पनि काजानमा माक्र्सवादको अध्ययन सुरु गरे । माक्र्सवादको अध्ययनबाट लेनिनले सर्वहारा श्रमिक वर्गलाई पुँजीपति वर्गको शोषणबाट मुक्ति दिलाउन पुँजीवादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गरी समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्ने कुरा सिके । (कार्ल माक्र्सका अनुसार निजी सम्पत्तिको नाममा केही नभएका, काम गर्ने औजारसमेत पनि आफ्नो नभएका औद्योगिक मजदुरहरु नै सर्वहारा श्रमिक हुन् ।) जुनबेला लेनिन क्रान्तिकारी आन्दोलनमा उत्रिँदै थिए, पश्चिम युरोपको मजदुर आन्दोलनमा माक्र्सवादी बिचारधाराले ठाउँ लिइसकेको थियो । र, त्यो क्रमशः रुसतिर फैलिँदै थियो । गेओर्गो प्लेखानोभ रुसमा माक्र्सवादका पहिलो प्रमुख प्रचारक थिए । लेनिनले माक्र्सको प्रमुख कृति ‘पुँजी’को गहन अध्ययन गरे । युवा उमेरमा नै आफ्नो वाक्पटुताले अरुलाई आकर्षित गर्ने र विश्वास दिलाउने क्षमता लेनिनमा थियो ।
← लेनिन जयन्ती तथा नेकपा स्थापना दिवस
कोभिड १९ र देशको सम्झना (परदेश–डायरी) →
१० भाद्र २०७५, आईतवार १३:३९ Janabato Online Comments Off on निर्मला पन्तको घटनामा सलग्न लाई कडा कार्यबाही हुनुपर्ने भन्दै सन्धिखर्कमा विरोध प्रर्दशन
कमाण्डर कमरेड सुनिल ढल्दा
१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०६:०० Janabato Online Comments Off on कमाण्डर कमरेड सुनिल ढल्दा
किन पुगे मुस्ताङमा भारतीय राजदूत पुरी ?
२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०७:०१ Janabato Online Comments Off on किन पुगे मुस्ताङमा भारतीय राजदूत पुरी ?